Andriamifidisoa Zo · Marsa 2016 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Marsa, 2016
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Marsa, 2016
Andao Hitety An'i Lima sy Mexico Fahiny
Amerika Latina 20 Marsa 2016
Ny sary sasantsasany no mitondra antsika any amin'ny toerana sy fahatsiarovana mahamanina ny olona hafa; saingy noho ny sary zaraina an-tserasera dia afa-mitety toerana sy fotoana samihafa any Lima sy Mexico ianao.
Sary Nolokoina An-Dalana Mampiseho An'i Vietnam, Singapaoro, ary Filipina Nandritra Ny Taonjato Faha-20
Azia Atsinanana 19 Marsa 2016
Andao hanao dia lavitra ho any amin'ny taloha mampanembona amin'ny alalan'ny fijerena ireto sary teny andalambe taloha teo Filipina, Singapaoro, ary Vietnam ireto.
Nahoana No Tsirim-Panantenana Hoan'i Somalia Ravan'ny Ady Ny Dia Lavitr'Ezaka Nataon'ny Elefanta Iray
Afrika Mainty 18 Marsa 2016
"Nitranga ny fahagagana, ankehitriny isika tsy maintsy manara-maso io elefanta io ary tokony hampirisihana ny Somaliana ho amin'ny fitehirizana fa tsy ho amin'ny famonoana."
Syriana Manamarika Ny Tsingerintaona Fahadimin'ny Revolisiona Amin'ny Alalan'ny Fihetsiketsehana Bebe Kokoa
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Marsa 2016
Mihoatra ny dimy alina sy roa hetsy ny isan'ny Syriana maty nisy namono hatramin'ny nanombohan'ny fihetsiketsehana manohitra ny fitondrana dimy taona lasa izay. Na dia eo aza ny fielezan'ny famoniana, dia niverina an-dalambe ny mpanao fihetsiketsehana.
Mifampizara Lahatahiry Amin'ny Departemantan'ny Fitaterana Ao Moskoa Ankehitriny Ny Uber
Miaramiasa amin'ny manampahefana ao Moskoa ankehitriny ary mizara ny lahatahirin'ny fivezivezeny amin'ny sampan-draharaham-pitaterana ao an-toerana ny Uber, ilay mirazotra malazan'ny taxi sy be mpanohitra.
Nahare Ve? Niverina Ny Global Voices Podcast
Amerika Latina 15 Marsa 2016
Taorian'ny telo taona niatoana dia niverina ihany tamin'ny farany ny Global Voices Podcast. Amin'ity andiany ity izahay hitondra anareo ho any Meksika, Shina, Tajikistan, Makedonia ary Rosia.